iPad Pro iyo vs. Tartan: kiniiniyada waaweyn wejiga fool ka fool | Wararka IPhone
iPad Pro iyo vs. Tartan: kiniiniyada waaweyn weji ka waji
Paul Aparicio | | Tartanka, iPad, iPad Pro
Iibinta kiniiniyada ayaa hoos u dhacay waxayna ku sameeyeen dhamaan noocyada kala duwan. In kasta oo iPad sii ahaanshaha isaga iibshaha ugu fiican kiniiniyada dhexdooda, waxa kale oo ku soo dhacaya a iibka muhiimka ah hoos u dhac. Dhab ahaantii, waa wax macno samaynaya, maadaama isticmaalka aan siinno kiniinnada, ay caadi tahay inaan iyaga ka qabanno muddo ka dheer taleefannada casriga ah, oo waliba leh qayb bulsheed iyo "waan u baahanahay", eeg xigashooyinka, si loogu cusbooneysiiyo oo intaa ka badan.
Si loo isku dayo in xaaladdan wax looga beddelo, Apple ayaa usbuucii la soo dhaafay soo saartay iPad Pro, oo ah kiniin 12,9-inji ah oo bilawgii ay noo sheegeen inay ku wajahan tahay adeegsiga xirfadda leh. Laakiin iPad Pro maahan kiniinkii ugu horreeyay ee in ka badan 12 inji oo la soo bandhigo, ka fog. Kahor, Galaxy Note Pro 12.2 ama Qalabka Pro 3, mid kasta oo leh nidaam hawlgal oo kala duwan. Hoos waxaad ku aragtaa saddexda kiniin oo midba midka kale wajahayo.
iPad Pro iyo vs. Galaxy Note Pro 12.2 iyo vs. Dusha sare 3
Sida aad arki karto, waxaa jira astaamo loogu talagalay dhammaan dhadhanka, laga bilaabo nidaamka hawlgalka. IPad Pro ayaa isticmaali doona iOS 9.1, Galaxy-ka Android 4.4 iyo dusha sare 3 Windows 10. Shaashadda 'iPad Pro' waa tan ugu ppi badan, oo gaareysa 265, laakiin Surface 3 waa midka leh suurtagalnimada inuu yeesho RAM dheeri ah, oo gaaraya illaa 8GB. Kaamirada hore ee ugu fiican waxay ku taalaa Surface 3 kamarada ugu weyn ee ugu fiicana waxay kujirtaa iPad Pro, liiska waxaa ku jira qashin, maadaama qaabka iPad Pro uu yahay 64GB oo uusan aheyn 32GB.
Waxaan u maleynayaa doorashada udhaxeysa seddexdan kaniini inay ku saleysnaato nidaamka qalliinka. Inta kale, Samsung waa midka u muuqda mid dabacsan, laakiin sidoo kale waa kan ugu da'da weyn. Surface Pro 3 ayaa bilo yar kayar iPad-ka, oo noqon kara guuleyste, weli ma uusan iibin. Waxaa muhiim ah in la xuso in liistadu aysan cadaalad ahayn waqtiga kiniin kasta uu haysto, laakiin waa waxa ay hadda yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » iPad Pro » iPad Pro iyo vs. Tartan: kiniiniyada waaweyn weji ka waji
Ogeysiiska Pro waa in la siiyaa daaqadaha 10.
Dhamaanteen waan ognahay in nidaamka ugu fiican ee hawlgalka uu yahay Windows 10, macruufka xitaa uma dhawa in lala barbardhigo Windows ama Mac OS iyo kaniiniga ugu awooda badan maxaa yeelay makarafoonada gacanta, si kasta oo ay u fiicnaadaan, wax shaqo ah kuma laha micro like i5 ama i7 micno malahan hadii Coock uu doonayo inuu xabadka ka saaro isagoo dareemaya wax badan culeys malahan .. Shaki la'aan IPad pro wuxuu yahay toy ku xiga dusha sare wuxuu leeyahay nidaam qalliin oo dhab ah oo ka badan inta lagu caddeeyay inuu la shaqeynayo dhabta codsiyada oo aan mobile fidsan. Haddii aan heli lahaa makarafoon dhab ah iyo Mac OS, waxay noqon lahayd wax kale laakiin dabcan ma helayo iPad ka weyn oo ah ka shaqaynta ... salaan
Pablo Maxaad u maleyneysaa in iDevice ka socda PRO uu adeegsanayo macruufka halkii OS X?
Waxaan u maleynayay inay tahay wax aan micno lahayn, oo intaa ka sii badan oo leh odhaahda ah in barnaamijka 'iPad pro' xitaa uu ka sii fiicnaan doono Macbook PRO.
Runtu waxay tahay anigu garan maayo waxaan ka fikiro. Sikastaba, MacBookga Air ayaa sidoo kale soconayay OS X, marka "Pro" waa midka ugu horumarsan, aan dhahno.
Nidaamka waxku waa OS X sifiican ugama arko kiniiniyada iyo macruufka uma arko sifiican kumbuyuutarrada. Waxaan u maleynayaa inay tahay inay waxyar beddelaan oo ay sameeyaan mid guud, laakiin waxaan u maleynayaa in Apple aysan taas sameyn doonin.
Alessandro Manuel Perez dijo
Weligaa ma maqashay oraahda Khibrad Isticmaalaha, maxaa yeelay Nidaamyada Howlgalka ee aan ku habbooneyn taabashada, waa kuwo aan waxtar lahayn. Ma ahan laptop wanaagsan ama kan wanaagsan? Haddaba waa maxay
Jawaab Alessandro Manuel Pérez
IPhone 6s Plus Rose Gold, wadada loo maro iibiyaha ugu fiican